के धन आर्जनप्रति हाम्रो धारणा सही छ ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home अर्थविशेष के धन आर्जनप्रति हाम्रो धारणा सही छ ?
के धन आर्जनप्रति हाम्रो धारणा सही छ ?
– विश्वराज अधिकारी
धन आर्जनप्रति हाम्रो धारणा पश्चिमेलीहरूभन्दा ज्यादै पृथक छ। यो पृथक धारणाको कारणले गर्दा पनि हामी गरीब भएको हुनुपर्छ। पश्चिमाहरू धनलाई परिश्रमको पारितोषिक मान्दछन् भने पूर्वीयहरू भाग्यको खेल। भाग्यले गर्दा कुनै व्यक्ति धनी हुने वा भाग्यले गर्दा गरीब हुने कुरामा पूर्ण आस्था राख्छन्।
एशियालीहरू र खासगरी दक्षिण एशियालीहरू धन कसैले दिएर प्राप्त हुने कुरामा अति विश्वास गर्छन् अनि देवी लक्ष्मीलाई धनको देवी मानेर पूजा गर्छन्। देवी लक्ष्मी प्रसन्न भएमात्र धन प्राप्त हुने विश्वास गर्दै उनको पूजा–आराधना गर्छन्। लक्ष्मीपूजाको दिन त धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा विशेष किसिमले गर्छन्।
भगवान्प्रति श्रद्धा भएर निस्स्वार्थ भावले पूजा गर्नु बेग्लै कुरा हो। लक्ष्मी मातालाई देवी मानेर पूजा गर्नु, श्रद्धा भक्ति प्रदर्शन गर्नु राम्रो कुरा हो। भगवानलाई आदर गर्नु उचित हो। तर भगवान्लाई धन दिने स्रोतको रूपमा देख्नु र धनप्राप्तिका लागि कर्म गर्नुको साटो भगवान्को पूजा गर्नु अनि आकस्मिकरूपमा धन प्राप्त हुने आकाङ्क्षा राख्नु चाहिं उचित होइन। कर्म नगरेर धनको अपेक्षा गर्नु कदाचित उचित होइन। कर्म नगरेर धनको अपेक्षा गर्नु एक प्रकारको पाप हो। अप्रत्यक्ष किसिमले गरिने अपराध हो।
धन आकस्मिकरूपमा कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। धन पाउनका लागि बौद्धिक अभ्याससहित कठोर परिश्रम गर्नैपर्छ। कठोर परिश्रमको विकल्प छैन। धन आकस्मिकरूपमा त्यस बेला प्राप्त हुन्छ, जब देशमा जनता र सरकार दुवै आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देशमा नियम र कानूनको निष्पक्ष एवं कठोरताका साथ पालन भएको हुँदैन। सरकारी कार्यालय (नेपालको सन्दर्भमा कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयहरू) जहाँ जनहितको कार्य हुनुपर्ने हो, काम कम र घूस लेनदेन बढी हुने भएकोले त्यस किसिमका कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई आकस्मिक धन प्राप्त हुन्छ। उनीहरू आकस्मिक वा कर्मविना धन प्राप्त गर्न सक्रिय रहन्छन्।
यसैगरी, कालाबजारी तथा गैरकानूनी व्यापार, उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरूले पनि आकस्मिक धन प्राप्त गर्छन्। दक्षिण एशियाका देशहरूमा कालाबजारी एवं गैरकानूनी व्यापार बढी मात्रामा सञ्चालन हुने भएकोले पनि व्यापारीहरूले आकस्मिकरूपमा ठूलो धन प्राप्त गर्छन्। छोटो अवधिमा धेरै धनी हुन पुग्छन्। अर्थात् जुन देशमा आर्थिक भ्रष्टाचार जनस्तर (आफ्नो काम गराउनका लागि कुनै व्यक्तिले सरकारी कार्यालयको सम्बन्धित व्यक्तिलाई घूस दिनु) र सरकारीस्तर (मन्त्री, सचिव जस्ता उच्चपदस्थ र निम्न पदका व्यक्तिले जनताको काम गरेबापत पैसा लिनु तथा कुनै किसिमको प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ प्राप्त हुने स्थिति सृजना गर्नु)मा हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू आकस्मिकरूपमा धनी हुन्छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, नेपालजस्ता दक्षिण एशियाली देशहरूमा आकस्मिकरूपमा धनी हुनेहरूको सङ्ख्या बाक्लो छ।
दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा त्यहाँको राजनीतिक स्थितिले पनि धन परिश्रमविना आकस्मिकरूपमा प्राप्त हुने विश्वासलाई मलजल गर्छ। आकस्मिकरूपमा ठूलो धन प्राप्त हुने उद्देश्यका साथ बहुसङ्ख्यक मानिस राजनीतिमा लाग्छन्। हिजोसम्म सडकमा खाली खुट्टा हिंड्ने, झोपडीमा बस्ने र दुई छाक ढुक्कसँग खान नपुग्नेहरू पनि राजनीतिमा लागेपछि केही वर्षभित्रै विशाल महलको मालिक र करोडपति–अरबपति हुन पुग्छन्। दक्षिण एशियाको राजनीतिले पनि सर्वसाधारणलाई आकस्मिकरूपमा धन प्राप्त हुने विश्वास गर्न प्रेरित गरेको छ। त्यस्तो वातावरण सृजना गरिदिएको छ।
नियम कानून कडाइका साथ पालन हुने र गरीब तथा धनी सबैका लागि कानून एक समान हुने देशहरूमा पनि मानिसहरू छोटो समयमा धनी भएका उदाहरण त छन्, तर उनीहरू आकस्मिकरूपमा धनी भएका भने हुँदैनन्। उच्च बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर, कठोर परिश्रम गरेर धनी भएका हुन्छन्। पश्चिमा देशहरूमा धन परिश्रमद्वारा प्राप्त हुने जनविश्वास रहेकोले हरेक व्यक्ति कडा परिश्रम गरेर धन प्राप्त गर्न सक्रिय रहन्छ। आकस्मिकरूपमा धन प्राप्त गर्ने लालसा उसको मस्तिष्कको कुनै पनि कुनामा हुँदैन। पश्चिमा देशहरूमा प्रत्येक बालबालिकालाई धन पूजा–आराधना गरेर होइन, परिश्रम गरेर प्राप्त हुने संस्कार सिकाइएको हुन्छ। स्कूल–कलेजमा पनि त्यसै किसिमको शिक्षादीक्षा दिइन्छ। बालबालिका आकस्मिकरूपमा धन प्राप्त हुने मनोविज्ञानका साथ हुर्केका हुँदैनन्। यस कारणले पनि युवा अधिक परिश्रम गरेर, नयाँ–नयाँ विचार खोजी गरेर धन प्राप्त गर्ने कोशिश गर्छन्। उनीहरूले धनलाई भाग्यसँग जोड्दैनन्। धनलाई अथक प्रयास र परिश्रमको परिणाम मान्दछन्।
अमेरिकाका केही चर्चित व्यक्ति जस्तै मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोज छोटो समयमा खरबपति भएका हुन् तर उनीहरूले ठूलो धन आकस्मिकरूपमा प्राप्त गरेका भने होइनन्। कठोर परिश्रम गरेर, नयाँ–नयाँ सोचको विकास गरेर धनी भएका हुन्। फेसबूकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग त केवल ३५ वर्ष (हालको उमेर)मा खरबपति हुन पुगेका छन्। मार्कले सूचना र जानकारी प्रवाहको क्षेत्रमा चमत्कार नै गरेर देखाए। संसारभरिका मनिस एउटा प्लेटफार्ममा भेला हुन सक्ने तथा उनीहरूबीच अन्तत्र्रिmयासमेत हुन सक्ने सर्वाधिक नयाँ सूचना प्रविधि (facebook)को विकास गरेर मार्कले संसारलाई छक्क पारिदिए। अर्कोतिर सूचना, विचार, चिन्तनको प्रवाह गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने प्रविधिको सृजना गरिदिए। फेसबूकको विकास र कार्यले गर्दा अहिले संसारभरिका व्यक्तिबीच विचार आदानप्रदान सजिलो भएको छ। फेसबूक, सूचना एवं जानकारी उत्पादन, वितरण एवं व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ठूलो चमत्कार हुन पुगेको छ। मार्क जुकरबर्ग यस किसिमको चमत्कारी कार्य गरेर धनी भएका हुन्। आकस्मिक किसिमले कुनै ठूलो धन हात पारेर धनी भएका होइनन्। उनको अहोरात्र सक्रिय चिन्तन एवं कठोर परिश्रमले उनलाई धनी बनाएको हो। केवल धनी हुने सपना देखर उनी धनी भएका होइनन्।
कम उमेरमा खरबपति हुने अर्का व्यक्ति हुन जेफ बेजोज। उनी केवल ५६ वर्ष (हाल)को उमेरमा संसारको सर्वाधिक (एक नम्बर) धनी व्यक्ति हुन पुगेका छन्। जेफ पनि आकस्मिकरूपमा धनी भएका होइनन्। उनी एक नम्बर धनी हुनुको पछाडि उनको परिश्रमको पहाड छ, अमेजनको विकास छ। उनले खरीदको संसारमा चमत्कारी परिवर्तन ल्याइदिए। इन्टरनेट प्रयोग गरेर, अनलाइन खरीद–बिक्री यति ठूलो परिमाणमा र यति सहजताका साथ गर्न सकिन्छ भनी मानिसले कहिले पनि सोचेका थिएनन्। जेफले ‘अमेजन’को स्थापना गरेर अनलाइन खरीद–बिक्री सजिलो मात्र पारिदिएनन्, संसारको एक कुनाको व्यक्तिले संसारको अर्को कुनाबाट सामान खरीद गर्न सक्ने र यसैगरी बिक्री गर्न सक्ने सहज वातावरण पनि सृजना गरिदिए।
अनलाइन बिक्री गर्दा विक्रेताले पसल स्थापना एवं सञ्चालन गर्नु नपर्ने र उत्पादकले पनि सोझै उपभोक्तासम्म सामान पु–याउन सक्ने भएकोले अनलाइन खरीद–बिक्रीलाई बढी स्वीकार्य पारेर, बिक्री लागत कम पारेर, सामानहरूको मूल्य पनि जेफले कम पारिदिए। अहिले स्थिति यस्तो भएको छ कि अमेरिकाका कतिपय शहरभित्रका पसलहरू अनलाइन खरीद–बिक्रीले गर्दा बन्द भइरहेका छन् भने अनलाइन खरीद–बिक्री ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना सङ्कटको यस महामारीमा पनि अनलाइनको सहज प्रयोगले गर्दा खरीद–बिक्री प्रभावित भएको छैन। उत्पादकहरूले सहज किसिमले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सकेका छन् भने उपभोक्ताहरूले घर–दैलौमैं समान प्राप्त गरिरहेका छन्। र यो स्थिति अमेनजले सृजना गरिदिएको हो। अमेजनको चमत्कारी विकास गरेर जेफ धनी भएका हुन्, कठोर परिश्रम गरेर धनी भएका हुन्, नयाँ किसिमको व्यापार पद्धति
(अनलाइन खरीद–बिक्री प्रणाली) विकास गरेर भएका हुन्। आकस्मिक किसिमले वा भाग्यले गर्दा धनी भएका होइनन्। जेफसँग अहिले (सन् २०२०) ११३ बिलियन डलर बराबरको सम्पत्ति छ।
आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने फोब्र्सको तालिका (सन् २०२०) अनुसार विश्वका दश सर्वाधिक धनीमध्ये आठजना व्यक्ति केवल अमेरिकाका छन्। ती दशजनामध्ये एकजना फ्रान्स र अर्का एकजना स्पेनका हुन्। विश्वका सर्वाधिक दश धनी व्यक्तिमा आठजना अमेरिकी मात्र कसरी हुन पुगे होलान् ? कारण के होला ? उत्तर सजिलो छ। आम अमेरिकीहरू धनलाई नयाँ विचार र कठोर परिश्रमको परितोषिक मान्दछन्। धनलाई आकस्मिक लाभको रूपमा देख्दैनन्।
धन आर्जन एवं प्राप्तिप्रति हाम्रो परम्परागत धारणामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ किनभने यो धारणासँग हाम्रो गरीबी जोडिएको छ। हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि देव, पितृ आदिलाई गुहारेर धनी हुने वा धन प्राप्ति हुने होइन। धन नयाँ विचार एवं कठोर परिश्रमले प्राप्त हुने हो। धनको भाग्यसँग होइन कठोर परिश्रमसँग बलियो साइनो छ। यो धनप्राप्तिको मूलमन्त्र हो। देव, पितृलाई गुहारेर धनी हुने भइदिएको भए संसारमा कुनै पनि व्यक्ति गरीब हुने थिएन। कुनै पनि राष्ट्र गरीब हुने थिएन।
Previous articleमाटो सुहाउँदो आर्थिक विकास
Next articleके सिक्यो त सरकारले ?
नेपालको अर्थतन्त्र लेबनानजस्तै हुन सक्छ
आर्थिक विकासमा शिक्षा र स्वास्थ्य
वामपन्थी विचारको छायामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र